FITSARAM-BAHOAKA : Miha-mahazo vahana any amin’ny faritra | NewsMada
FITSARAM-BAHOAKA : Miha-mahazo vahana any amin’ny faritra
Par Freenews sur 06/02/2017
Izy roalahy niharan’ny fitsaram-bahoaka.
Roalahy tratran’ny fokonolona nangalatra lavanila maitso tany amin’ny faritr’i Mahanoro iny no niharan’ny fitsaram-bahoaka ny faran’ny herinandro lasa teo. Araka izany, mbola mipetraka hatrany ny tsy fahatokisan’ny fokonolona ny fitsarana amin’izao fotoana izao.
Tsy mety mijanona amin’izao fotoana izao ny fanaovana fitsaram-bahoaka eto Madagasikara. Ny marainan’ny zoma lasa teo, roalahy voalaza fa nangalatra lavanila no indray matin’ny fokonolona tany amin’ny toerana antsoina hoe Antandroho, distrikan’i Mahanoro.
« Nandeha môtô izy roalahy ireo ary nisy nahatsikaritra ny asa ratsy nataon’izy ireo. Velona avy hatrany ny antsoantso nataon’ny olona nahita izany ka vetivety dia tonga ny fokonolona. Rehefa nifanenjika nandritra ny fotoana naharitraritra dia tratra ihany izy roalahy. Moto no nentin’izy ireo tamin’izany », hoy ny fampitam-baovao avy tany an-toerana.
Tezitra vokatr’izany ny fokonolona, hoy ihany ny fampitam-baovao, ka avy hatrany dia nisy ireo nikasi-tànana azy roalahy ireo. Nisy tamin’ireo olona sasany tonga teo ihany koa no nandoro ilay môtô nentin’izy ireo.
Tsy mahatoky fitsarana
Porofo iray ity nitranga tany Mahanoro ity fa efa tsy mahatoky fitsarana intsony ny olona amin’izao fotoana izao. « Efa mateti-pitranga loatra ny halatra lavanila maitso aty amin’ny faritra misy anay saingy mbola tsy nisy tratra ambody omby mihitsy raha tsy izao. Amin’ireny halatra teo aloha ireny, efa misy ny fitoriana napetraky ny fokonolona manoloana izany saingy mbola tsy nisy nahitana valiny mahafa-po hatramin’izao. Isan’ny antony nanaovan’ny fokonolona io fitsaram-bahoaka io izany », hoy ihany ny fampitam-baovao voaray avy tany an-toerana.
Araka ny vaovao voaray hatrany, samy zanak’i Mahanoro avokoa izy roalahy niharan’ny fitsaram-bahoaka ireto. « Notapahan’ny fokonolona ny tanan’ny iray tamin’izy ireo, izay nolazainy fa hanatra ho an’ireo izay mbola mikasa hanao ity asa ratsy ity », hoy ihany ny loharanom-baovao.
Efa eo ampelatanan’ny zandarimariam-pirenena amin’izao fotoana izao ity raharaha fitsaram-bahoaka ity ary andrasana ny tohin’izany.